कोरो’नाबाट थप पाँच जनाको मृ’त्यु, नेपालमा मृ’तकको संख्या ३२२ पुग्यो ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कोरो’नाबाट थप पाँच जनाको मृ’त्यु, नेपालमा मृ’तकको संख्या ३२२ पुग्यो !
काठमाडौं, २६ भदौ । कोरो’ना भाइ’रस संक्र’मणका कारण नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप पाँच जनाको ज्या’न गएको छ । योसँगै नेपालमा मृत’क संख्या ३२२ पुगेको छ ।
आज एक महिलासहित पाँच जनाको को’रोनाबाट मृ’त्यु भएको हो । मोरङकी ४० वर्षीया महिला,महोत्तरीका ६५ वर्षीय पुरुष, धनुषाका ४५ वर्षीय पुरुष,काठमाडौंका ७० वर्षीय पुरुष र नवलपरासीका ५५ वर्षीय पुरुषको को’रोनाबाट मृ’त्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो ।
अर्को समाचार , पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ५४ जनामा कोरो’ना भाइ’रस पुष्टि भएको छ। यो सहित संक्र’मितको संख्या ५१ हजार ९१९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। बिहीबार मात्रै १२ सय ४६ जनामा को’रोना देखिएको थियो।
१४ हजार ९२५ कोरो’नाका सक्रिय सं’क्रमित छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा ६ हजार ६३४ रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा ८ हजार १९१ जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा ६ हजार ७८ जना रहेका छन्।
पछिल्लो २४ घण्टामा ९७२ जना को’रोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या ३६ हजार ६७२ पुगेको छ। यो ७१ प्रतिशत हो। यस्तै आइसीयूमा १७० जनाको उपचार भइरहेको छ भने २५ जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म ३२२ जनाको निधन भएको छ। शुक्रबार मात्रै ५ जनाको नि’धन भएको छ।